हलिउड अभिनेता ‘द रक’ ले गरे दोश्रो बिवाह
वीवीसी, हलिउड अभिनेता ड्वेन जन्सनले आफ्नी प्रेमिका लरेन ह्यशिअनसँग अमेरिकाको हवाईमा विवाह गरेका छन् । ‘द रक’ उपनामले चर्चित रेस्लिङ स्टार सतचालीस वर्षीय जन्सनले १५ करोड ४० लाख प्रयोगकर्ताले पछ्याइरहेको आफ्नो इन्स्टाग्राममा विवाहको घोषणा गरेका थिए । सो जोडी सन् २००६ देखि प्रेमसम्बन्धमा थियो । हवाईमा आयोजित एउटा गोप्य समारोहमा उनीहरूको विवाह भएको हो । […]
पोनस्टार तथा बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनी नेपाल आउँदै
काठमाडौं । पोनस्टार तथा बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनी आइटम डान्स गरेको नेपाली फिल्म ‘पासवर्ड’ को प्रिमियरमा नेपाल आउने भएकी छिन् । सन्नीले एक भिडियोमार्फत आफू नेपाल आउन लागेको बताएकी छिन् । भिडियोमार्फत उनले नेपाललाई सम्बोधन गर्दै आफू नेपाल आउन लागेको बताएकी छिन् । उनले ११ सेप्टेम्बरमा नेपाल आउने जानकारी भिडियोमार्फत गराएकी छिन् । भदौ १३ […]
किन अस्वीकार गरिन् बलिउड अभिनेत्री शिल्पाले १० करोडको अफर ?
एजेन्सी, बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीले हालै एक आयुर्वेदिक कम्पनीले उत्पादन गरेको स्लिमिङ पिल्सको विज्ञापनमा अभिनयको १० करोड भारतीय रुपियाँ अफर अस्वीकार गरेकी छिन् । आयुर्वेदिक विधिबाट पातलो बन्ने चक्कीको विज्ञापनको लागि गरिएको उक्त अफर उनले अस्वीकार गरिदिइन् । शिल्पाले भनिन्, ‘म कुनै यस्तो कुनै कुरा पनि बेच्न सक्दिन जसमा मलाई विश्वास छैन । स्लिमिंग पिल्स […]
बलिउड अभिनेत्री राखी सावन्तले बिहे गर्ने भन्दै एक युवकसंग ४ करोड लिएको खुलासा
एजेन्सी, बलिउड अभिनेत्री राखी सावन्त फेरी विवादित भएकी छन् । उनले युट्युबर दिपक कलाल विवाह बन्धनमा बाँधिने चर्चा चलेपनि त्यो असत्य भएको पुष्टि भएको छ । राखीले दिपकसँग नभई अर्कै युवकसँग विवाह गरेपछि उनीहरुको चर्चा फेरि सुरु भएको छ । राखीले अहिलेसम्म श्रीमान् रितेशसँग फोटो पोष्ट गरेकी छैन तर उनले आफ्नो विवाह भएको खबरलाई पुष्टि […]
एजेन्सी, बलिउड अभिनेत्री जरिन खानले बम्बे टाइम्सलाई दिएको अन्तरवार्तामा आफ्नो सलमान खानसँग विवाह हुन लागेको खुलासा गरेकी छिन् तर पछि उनले आफू ठट्टा गरिरहेको र यो कुरा हल्लाको रुपमा फैलिओस् भनेर चाहेको स्पष्टिकरण दिइन् । जरिन खानले सलमान खानको फिल्म वीरमार्फत् बलिउडमा डेब्यू गरेकी थिइन् । बम्बे टाइम्सले जब उनलाई सलमान खानसँग जोडिएको के हल्ला […]
विभेदको यो राज्य हैन एकताको महान् यो देश बनोस् ! न्याय मपाए गोर्खा जानु भन्ने सन्देश पुन: साकार होस !!१!! भत्काऊ मनका तिम्रा सारा विभेदका किल्लाहरुलाई ! जोडेर आऊ बरु देशका हरेक गाऊँ र जिल्लाहरुलाई !!२!! नेपाली नेपाली माझ न त कुनै भेद भाव नै तिमी राख ! सारा नेपालीलाई तिम्रो मुटुको माझमा असलपनले राख […]
सेक्सी देखिन स्तन सर्जरी गर्ने बलिउडका नायिकाहरु
फेसमा प्लास्टिक सर्जरी गर्नेदेखि लिएर स्तन सर्जरी सम्म गर्ने गर्छन् नायिकाहरु । बलिउडमा स्तन सर्जरी गरेर ठुलो बनाउने चलन रही आएको छ । आफ्नो फरक लुक्स साथै सुन्दरता थपियोस भन्ने मनसायले नायिकाहरु स्तन सर्जरी गरेर ठुलो बनाउने गरेको देखिन्छ । सर्जरी मार्फत स्तन को आकार परिवर्तन गर्ने नायिकाहरु :
एजेन्सी । विश्वमा यस्ता महिलाहरु छन् । जो उनिहरु बिश्वमा चर्चीत रहेका छन् । उनिहरुको फरक रुपकाका कारण संसारभर चर्चा चल्ने गरेको छ । जसका कारण यी महिलाहरु संसारभर चिनिनुका साथै केहीले गिनिज बुक अफ वोर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन पनि सफल भएका छन् । संसारभरमा सबैभन्दा लचिलो महिलाको रुपमा चर्चित ज्लाता रहेकी छिन् । उनको […]
न त भाग नै खोसी म खाऊँ है सबैको ! न त आँशु झारौँ यो जीवनमा कसैको !! न त आरोप लाऊँ म झुठो नै कसैलाई ! रुवाएर नहाँसौँ कुनै दिन पनि अरुलाई !! जीवनको महिमा म बुझौँ है त सबैको ! आफु हाँस्नलाई खुशी नखोसौँ कसैको !! म ठुलो हुँ भन्ने दम्भ, भाव नै […]
आमिर खानकी छोरी इराको ग्ल्यामरस अवतार
एजेन्सी, बलिउड नायक आमिर खानकी छोरी इरा खानको फोटोसुट मिडियामा चर्चाको विषय बनेको छ । फोटोमा इरा खानलाई निकै ग्ल्यामरस अन्दाजमा देखिएको छ । इराले फोटो सेयर गर्दै लेखिन्, ‘तिमी को हौ ?’ इराले इन्स्टाग्राममा उक्त फोटोसुटका विभिन्न तस्बिर सेयर गरेकी छिन् । इरा खानको बलिउड डेब्यूको विषयमा पनि विभिन्न अनुमान गरिँदै छन् ।
मुम्बई । पूर्व पोर्नस्टार तथा बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनीले यौन सम्बन्धबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेकी छिन् । हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार, पोर्नस्टार भएको नाताले सन्नीलाई सोधिएको थियो कि शारीरिक सम्बन्धका बारेमा के सोच्छिन् के उनी सेक्सलाई सही मान्छिन् ? यी प्रश्नको जवाफ दिँदै सन्नीले भनेकी छिन्– यदी कुनै युवतीलाई बच्चा चाहिएको छैन् भने उनलाई औषधिको प्रयोग […]
एक चर्चित नायिकाले विवाह नै नगरी छोरी जन्माएको विषयले अहिले भारतभर चर्चा पाइरहेको छ । अववाहित नायिकाले आफूसँग तीन वर्षकी छोरी रहेको बताएपछि धेरैलाई अचम्म लागेको छ । ती नायिका हुनु, माही गिल । आफू अविवाहित रहेरै छोरीलाई जन्म दिएको र अब भने विवाह गर्ने चोच बनाएको उनले बताएकी छन् । नवभारत टाइम्समा हालै प्रकाशित […]
प्रेमी/प्रेमिकाले एक अर्काको चुम्बन गर्नु स्वभाविकै हो । तर यो दुनियाँमा एउटा प्रेमजोडी यस्तो छ, जसले एक अर्काको रगत पिउँछन् ।सुन्दैमा झसङ्ग भइने यो सत्य घटना इटालीको हो । इटालीका ती ब्वायफ्रेण्ड र गर्लफ्रेण्डले एक अर्काको रगत पिउँदछन् । यसको कारण पनि निकै अनौठो छ । द मिररका अनुसार करीब पाँच वर्ष पहिले डेनिस नामका […]
एजेन्सी, ६ वर्षको बच्चाले करोडौं रुपैयाँ कमाएर आमाबाबुलाई ५ वटा आलिसान महलको मालिक बनायो भन्ने कुराले धेरैलाई अचम्मित बनाउन सक्छ । तर, यो कुरा साबित भएको छ । ६ वर्षको उमेरमा नै एक बच्चाले ५५ करोड रुपैयाँ कमाएर बाबुआमाको नाममा ५ वटा महलहरु खडा गराएकी छिन् । ६ वर्षकी ती बच्चीको नाम हो बोरम । […]
पेटले थिचेर आफ्नै प्रेमीको हत्या
एजेन्सी, तपाइले कहिले पेट प्रयोग गरेर हत्या गरेको सुन्नु भएको छ । सायद पेटले थिचेर मान्छेको हत्या भएको यो पहिलो घटना हुनसक्छ । यो घटना अमेरिकाको पेन्सिल्भेनियामा भएको हो जहाँ एक महिलाले आफ्नै पेटले थिचेर प्रेमीको हत्या गरेकी छिन् । ४४ वर्षीया विन्डी थोमसले आफ्नो प्रेमी किनो बटलरको पेटले थिचेर हत्या गरेकी हुन् । विन्डीको […]
यी नायिका जसले २ सय २१ प्रेमीसँगको असफल सम्बन्धपछि गरे कुकुरसँग विवाह
एजेन्सी, बेलायती पूर्व मोडलले २ सय २१ प्रेमीसँगको असफल सम्बन्धपछि कुकुरसँग विवाह गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । ४९ वर्षीया इलिजावेथ होडले टेलिभिजन कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणमा आफूले पालेको कुकुरसँग विवाह गरेको बताएकी हुन् । इजिजावले सन् १९९० को दशककी चर्चित पेज ३ मोडल हुन् । त्यसबेला बेलायतमा पेज ३ भन्ने ट्रेन्ड थियो । पेज ३ […]
अभिनेत्री नेहा धुपियाले गराइन स्तनपान
एजेन्सी, अन्तर्राष्ट्रिय स्तनपान सप्ताहको अवसरमा अभिनेत्री नेहा धुपियाले ‘फ्रिडम टु फिड’ नामक अभियानको सुरुवात गरेकी छिन् । उनको औपचारिक इन्स्टाग्रामले छोरी मेहरसँगको भिडियो पोस्ट गर्दै उनले लेखेकी छिन्, ‘ह्यासट्याग फ्रिडम टु फिड – नेहा धुपियाको पहलमा । संवाद सुरू गरौं..आमा भएर हामी चाहान्छौं फ्रिडम टु फिड ।’ सो भिडियोमा मेहरको जन्मदिन, अभिनेत्री धुपियाको मातृत्व भाव […]
नायिका विद्या सिन्हा सिकिस्त, भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार हुँदै
एजेन्सी । ९० को दशककी चर्चित नायिका विद्या सिन्हा अहिले जिवन र मृत्युको लडाईसंग लडिरहेकी छन् । उनको मुम्बईको सिटी केयर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । अस्तालमा भर्ना भएकी विद्याको स्वास्थ्य स्थिती निकै नाजुक भएको बताइएको छ । अन्तिम अवस्थामा रहेकी उनलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार जारी राखिएको भारतीय मिडियाले जानकारी दिएको छ । उनको फोक्सो […]